हामी युद्ध गर्न झोक्राएका हौं ! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, चैत्र १, २०७७ मा प्रकाशित
भिरघरे एकाविहानै आइछस्। मेरो घाउमा नुनचुक छर्किन आएको त होलास् नि ! अरु तैंले के नै गर्ने हो र! हाम्रो त प्रचन्न काम्रेडको भासन पनि कार्यकर्तालाई नै लालाक- लुलुक पार्ने खालको आउन थाल्यो । खै के हो के हो, नेता नै मणि हराको सर्प जस्तो भए। अरुको त के कुरा गर्नु !
हौ काका ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर विजुली चम्किदा तर्सिन्छ’ भने जस्तो नगर न । म त काकीलाई बधाई दिन आको । तिमीले र मैले भनेको कुरा मिलेन काकीले ‘ओलीले ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्छन्’ भनेकी थिइन । ठ्याक्कै मिल्यो । उनलाई त बधाई दिनु पर्‍यो नि !
बधाई दिदै गर्लास् । पहिला काठमाडौंमा राजनीति के हुँदै छ एकसरो बता त भतिज!
के कहुँ हौ काका ! तिम्रो नेता प्रचण्ड मांसाहारी आन्दोलन गर्छु भन्थे अब गर्लान क्यारे ! अस्ति विहिबार भने ‘अझै बुढो भाको छुइन, चार वर्ष जनताको माझ जान्छु’ भन्दै थे । अब कुन जनताले पत्याउलान र ! मोहन वैद्य, सिपी गजुरेल, विप्लव जस्ता नेताले पहिलो झमटमा छोडेर हिडें। त्यसपछि लोकेन्द्र विष्ट, कालीबहादुर खामहर्ले ‘प्रचण्ड काम लाग्दैनन्’ भन्दै टाप ठोके । अलिपछि गोपाल किराती म माओवादी केन्द्र पुननिर्माण गर्छु तिमी ओलीतिरै जाउ प्रचण्ड, भन्दै टाप ठोके !
ए भिरघरे भतिज ! कतिखेर आइस् । म त भात पकाउँदै थिएँ थाहै पाइन !
म भखरै आ’को काकी ! तिमीलाई बधाई छ । जे गर्छन् अब ओलीले गर्छन् । अब चुनावपछि मात्रै हाम्रो देउवा दाइको प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आउने भयो । अँ काका ! म भन्दै थिएँ नि त्यसपछि जनयुद्ध कि धनयुद्धका हस्ती बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहा लगायतका नेताहरु ‘बरु हाम्रो सांसद पद गए जाओस् हामी ओलीतिरै बस्छौं’ भन्दै माओवादी पार्टी त्यागेर हिडें । त्यो भन्दा अगावै बाबुरामको खाल टाप ठोक्यो । उता जनयुद्धका लडाकुहरु धेरै जसो श्रम गर्न अरबको खाडी भासिए बाँकी रहेका ओलीतिरै लागे। जनतामा जाने कुरा त गरे तर नेपाली जनता प्रचण्डको अथवा माओवादीको पक्षमा छैन। प्रचण्ड त रस निचोरेर फ्याँकेको कागतीको खोस्टा बने ।
वाइयात कुरो नगर भिरघरे ! अब हामी फेरि क्रान्ति गर्छौ । प्रचण्डले ओली प्रवृत्ति विरुद्ध ठूलो क्रान्ति गर्छन् । माधव नेपाल, झलनाथहर्लाई हामी फर्काउछौ र कमाण्डर बनाएर रोल्पा तिर लान्छौ । हेर्लास् । अब चुनाप सुनाप हामी लड्दैनौं ।
जनताले पत्याए पो लड्छौ त बुढा चुनाप ! नेता, कार्यकर्ता, जनता सबैले माया मारेपछि अब लड्डु खाँदै ‘कमफर्टेवल’ सरकार बनाउछु भन्दै भाषन गरेर बस्ने !
के डेब्रो कुरा गर्छेस् झुम्री! एमालेको बज्रलिप संगठन तहसनहस पारेर हाम्रो प्रचन्न काम्रेडले शासन गर्ने दिन आउँछ । यहाँ त अदालतले धोका दियो र पो !
हौ काका ! ११ गते फैसला आउदा लड्डु खादै कमफर्टेवल सरकार बनाउन हाम्रो देउवा दाइकोमा जाने, २३ गतेको फैसला आउदा रुदै कोरामा बस्ने के गरेको। आखिर दुवै मुद्दा ओलीले नै हारेको हो। तिमार्को जित भाकै छ, अनि केको रुवावासी ! प्रतिनिधिसभा अदालतले ब्यूतायो ओलीले नै हारे, नेकपाको दुई तिहाइको सरकारबाट अल्पमतको सरखारमा ओली नै पुगे । तिमार्को माओवादी तिमार्लाई नै दियो, ओलीको एमाले ओलीलाई नै दियो । अदालतले के विरायो ?
विरायो मात्रै होइन हामीमाथि वज्रप्रहार भयो भिरघरे, वज्रपहार भयो । हेर्न उनारु आफ्नै पार्टी कार्यालय भवनमा सूर्य चिन्ह अङ्कित झण्डा गाड्दै र एमालेको साइनबोर्ड झुण्ड्याउँदै विजय उत्सव मनाउदै छन् । हामी झोक्रार बस्नु परेको छ । हाम्रो पार्टी रित्तो भयो, हाम्रो नेता, कार्यकर्ता तितरवितर भए । हामीलाई गाह्रो बनायो !
अनि हौ काका ! तिमार्को त भाङभुट्टी केही रैनछ । अस्तिसम्म के ओलीको भरमा उफ्रेका थियौं । कि माधव नेपालको टेको समातेर टिमुरकिएका थियौ ? अब अदालतले तिमार्को पार्टी फिर्ता देकै छ, आ-आफ्नो गरी खाओ भनेकै छ, किन यस्तो निरास बन्छौं ?
निरास होइन भिरघरे ! अब हाम्रो जननायक, सर्वहारा वर्गका महान नेता, सृुप्रिमो, राष्ट्रनायक काम्रेड प्रचन्नले महान क्रान्तितिर उन्नत प्रकारको छलाङ मार्ने छन् । मधेशी, जनजाति, महिला, उत्पीडित वर्ग, दुर्गम क्षेत्र सबैलाई समेट्ने खुवी प्रचन्नमा मात्र छ । हाम्रो प्रचन्नले भनी सके अब फेरि फर्किन्छु र क्रान्ति गर्छु भनेर । हामी अहिले झोक्राए जस्तो भए पनि ओइलाएका छैनौं । हान्छौ, तोड्छौं र र्फोछौं कुरो बुझिस् !
काल्पनिक कुरो गर्छौ के बुझ्नु ! तिम्रा गफ तिमी नै राख ! अब के मुखले क्रान्ति गर्छौ ! विप्लवले लडाकुको १९ अरव रुपैयाको हिसाव खोज्दै छन् । लडाकुले पैसा पाउँ भन्दै छन्। असल नेता ओलीतिरै लागे, कार्यकर्ता छैनन्, जनताले पत्याउदैनन् ।
मेरो कन्सिरी तात्ने कुरो किन गर्छस् ! तँ कांग्रेस भर पनि ओलीको प्रशंसा गर्ने ! सक्छस् भने प्रचन्नको प्रशंसा गर, होइन भने ‘जै नेपाल देउवा दाइ’ भन्दै काठमाडौं जा ! मुला कांग्रेसहर्लाई पनि हामीले जानेको छ । तिमी प्रधानमन्त्री बन, भारतलाई कमफर्टेवल सरकार बनाउँ भन्दा पनि देउवा नमान्ने । यस्तो पनि नेता हुन्छ ?
अब कन्सिरी नतताउ काका ! अब चुनापसम्म एमाले, त्यसपछि नेपालमा एक छत्र काँग्रेस! कि कसो काकी!
होइन भतिज अर्को ५ वर्ष पनि ओली नै हो ।
त्यस्तो हुँदैन काकी! चुनाप पछि देउवा नै हो । लु म घरतिर लागें ।
को लाउँछन् पार यो?